Group-ka E ee Koobka Adduunka Dumarka 2019 oo la soo gaba-gabeeyay… + SAWIRRO – Gool FM
(Paris) 20 Juunyo 2019. Waxaa goordhow la soo gabagabeeyey Group-ka E ee Koobka Adduunka Dumar 2019, iyadoo la xaqiijiyey kooxaha ee ka soo baxay Guruubkan.
Haddii aynu ku horreyno kulanka dhexmaray xulalka gabdhaha Netherlands iyo Canada, waxaana guul gaaray oo 2-1 ku adkaaday gabdhaha Holland.
Xulka Netherlands ayaa kaalinta koowaad 9-dhibcood kaga soo baxay Guruubka E kaddib markii ay wada adkaadeen dhammaan saddexdii kulan oo ay ciyaareen.
Kulankii caawa ay ka gareen Canada ayaa waxaa goolasha u daah furtay gabadha la yiraahdo Anouk Dekker, laakiin waa laga barbareeyey oo wacaa ciyaarta gar isku mid ah 1-1 ka dhigtay Christine Sinclair.
Laakiin gabadhaha Holland ayaa ugu dambeyn la yimid goolka ay guusha ku qaateen waxaana u dhalisay 75’daqiiqo Lineth Beerensteyn, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 looga adkaaday Canada kuwaasoo kaalinta labaad kaga soo baxay Guruubkan iyagoo leh 6-dhibcood.
Dhinaca kale waxaa kulan kale oo xiiso badan uu dhexmaray gabadhaha Cameroon iyo New Zealand, waxaana uu ku dhammaaday 2-1 oo ay ku adkaadeen gabadha Cameroon.
Ajara Nchout ayaa goolasha u daah furtay xulka Cameroon, laakiin Aurelle Awona oo ka tirsan ayaa own goal iska dhalisay taasoo ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1.
Laakiin gabdhaha Cameroon ayaa helay goolka ay guusha ku qaateen dhammaadkii ciyaarta daqiiqadihii lagu daray waxaana u dhalisay gabadha la yiraahdo Ajara Nchout, sidaas ayeyna kaalinta saddexaad ee Guruubka ku soo baxeen iyagoo u gudbay wareegga 16-ka, halka xulka New Zealand oo tartanka isaga haray.
“Neymar wuxuu Barcelona ku hogaamin karaa ku guuleysiga saddexley kale ee cusub” - Rivaldo